Google hanakatona Google+ - Websetnet
Google fotsiny nanambara fa handefa ny tolotra tambajotra sosialy ao amin'ny orinasa Google+ amin'ny mpanjifa mandritra ny volana 10 ho avy.
Google+ no tetika farany nataon'i Google tamin'ny famoronana mpikirakira Facebook izay mametraka an'i Google eo amin'ny sehatra mitovy amin'ny tambajotra sosialy momba ny mpampiasa sy ny isan'ny mpampiasa.
Ny Google+ dia nahazo fanamarihana samihafa sy fanombatombanana rehefa nanokatra azy io i Google tamin'ny 2011 taorian'izany Google Buzz efa nisotro ronono, fanandramana iray hafa amin'ny fahazoana làlana amin'ny tambajotra sosialy.
Ny fanombohan'ny Google+ dia nahatsiaro voatery, indrindra satria nahazo valisoa tamin'ny webmasters Google izay nampiditra ny serivisy tao amin'ny tranonkalany ary nanova ny fanehoan-kevitra ary rafitra fametrahana ao amin'ny YouTube ary tranonkala hafa ho an'ny Google+.
Amin'ny ankapobeny, inona no nataon'ireo Google tamin'izany Manosika ny kaonty Google+ amin'ny fametrahana ny asany amin'ny tranonkala malaza izay tsy voafetra alohan'ny.
Google dia nanomboka tetikasa anatiny antsoina hoe Strobe tany am-piandohan'ny 2018 izay nijery ny "fidiran'ny mpilatsaka an-tsokosoko fahatelo amin'ny kaonty Google sy ny angona Android" ary ny "sehatra tsy miankina amin'ny mpampiasa" amin'ny API noho ny olana manokana momba ny fiarovana sy ny sehatra hafa. izay tokony "hampihemotra" ny politikan'ny Google.
Ny iray amin'ireo tanjon'ny ekipan'ny tetikasa dia ny hoe "tsy nahavita nahazo mpanjifa lehibe na mpanangom-bokatra" ny Google+ ary "nahita fifandraisana tsy dia mahafa-po amin'ny fampiharana". Nahita i Google fa ny fifandraisana amin'ny mpampiasa ambany dia ambany raha ny 90% ny fivoriana dia tapitra ny latsaky ny segondra 5.
Ny ekipan'ny tetikasa Google dia nanadihady ireo API izay nomena ireo mpamorona ary nahita fa "sarotra ny manatsara sy mitazona izany". Nisy finday iray hafa ankoatra izay nahatonga ny fidirana amin'ny rakitra momba ny profesiela ireo mpampiasa Google+ nizara ny fifandraisana izay tsy public.
Raha voafetra amin'ny sehatr'asa matihanina amin'ny solo-tanana tahaka ny adiresy mailaka, ny fibodoana, na ny lahy sy vavy, Google dia nahita "tsy misy porofo fa diso ny fampahalalana momba ny profil".
Nofintinin'ny ekipa mpandinika ny Google:
Raha nanome ireo fanamby ireo sy ny fampiasana ambany pejy ny Google+ mpanjifa, dia nanapa-kevitra izahay ny handefa ny Google+ mpanjifa.
Ny orinasa dia mikasa ny hisintaka ny versionen'ny mpanjifa amin'ny Google+ mandritra ny vanim-potoan'ny 10 volana. Ny ampahany amin'ny mpanjifa amin'ny serivisy dia hisotro ronono amin'ny faran'ny volana Aogositra 2019.
Google dia mikasa ny hanao fanambarana amin'ny volana ho avy izay manome ny mpanjifa amin'ny fampahalalana fanampiny toy ny safidy hivezivezaina ny data na haka izany, ity farany ity amin'ny alàlan'ny tolotrasa Google Takeout.
Ny fiovana dia tsy misy afa-tsy ny Google® mpanjifa ihany. Google dia mikasa ny hamadika an'i Google+ amin'ny vokatra entina amin'ny orinasa.
Ny famerenana anay dia mampiseho fa ny Google+ dia mety tsara kokoa amin'ny vokatra entin-tanana izay ahafahan'ny mpiara-miasa mandray anjara amin'ny adihevitra anatiny eo amin'ny tambajotra sosialy.
Raha manafoana ny fanambaràn'i Google amin'ny fototra ianao dia hahatsapa fa nanapa-kevitra ny hanakatona Google Plus i Google noho ny fifandraisana ambany eo amin'ny mpampiasa amin'ny serivisy sy ny fahatsinjovana ny fametrahana harena maro ho an'ny serivisy mba hahasarika kokoa ny mpampiasa.
Noho izany, raha tokony hifikitra amin'ny vokatra, Google dia nanapa-kevitra ny hanakatona izany ho an'ny mpanjifa ary hamadika izany ho toy ny vokatra Enterprise tsy an-kery.
Tsy mampiasa haino aman-jery sosialy aho ary hampiasa ny Google+ amin'ny famoahana rohy amin'ny lahatsoratra vaovao. Ny serivisy dia manana olana goavana amin'ny spam fa toa tsy nahavita nanaisotra ny Google.
Izao ianao: Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Manao ahoana ny fandraisanao ny Google Plus? Hanao tetika hafa ve ve i Google mba handresy ny media sosialy?
The lahatsoratra Google hanakatona Google+ niseho voalohany tamin'ny gHacks Technology News.
Ny Google Translate dia mitombo amin'ny karazany roa amin'ny fiteny
Ny Outlook for iOS sy Android dia nahazo ny fikendren'ny skype Skype
Ny fomba fiasa 3 dia manome safidy maro kokoa noho ny fitaovana hafa momba ny trano fonenana (ao anatin'izany ny Apple)
USB Flash Drives - Mandritra ny fampiasana herinaratra amin'ny USBC-TKEY plugable
Photon Controller no loharano mivoaka
Oracle dia manandrana manamboatra ny zon'ny mpamorona amin'ny Android
Tags:Google Fanompoana tambajotra sosialy
Misaotra, ry lehilahy. Miaraka amin'ny fanampian'ny pejinao ankehitriny, azoko fantarina fa Google dia mihidy ny google +
ubuntu 15.04 Samsung PHP web browser Command 10 hametraka Database famotsorana lalao Linux Ubuntu Systems Linux Firefox Server Samsung Galaxy haino aman-jery sosialy CentOS 7 MAMAKA endri-javatra Twitter Windows Phone YouTube PPA HTTP Debian OS X iPhone Nginx Windows fanamarinana Ubuntu 14.04 command line Video Apps vaovao farany lalao toe-tsaina Ubuntu web server API Windows 10 CentOS rafitra Users nbsp File "PC Bing app store HTTPS Apple Watch 'App SEO Ubuntu 14.10 fifamoivoizana Apache bilaogy Support Microsoft Cortana finday avo lenta Plugins Company windows update Facebook Windows 8 raki-daza Screen Toetoetra ram SSH PDG MySQL Chrome taona fitaovana Performance Android SSD Google Fitaovana finday HTML Unité centrale fikarohana takelaka fikirakirana Unix IP adiresy fitaovana GNOME afa-po USB Rafitra fikirakirana Malagasy Bible fitaovana Microsoft Windows Phone rindrambaiko Linux Mint Up " tahirin-kevitra fitaovana finday famerenana 04 One ' bilaogy loharano misokatra Plugin Time WordPress paoma Ubuntu 16